Ụbọchị My Pet » 5 Ihe Ị Pụrụ Ịmụta Banyere dịwara site na 50 Shades nke Right Now
emelitere ikpeazụ: Jan. 18 2021 | 3 min agụ
Mgbe nụrụ nke iri ise shades nke Right Now? Ezie na ihe nile nke mama nwere na-eme ụmụ mmadụ agụụ mmekọahụ na ihe pụrụ iche na anụ ntị ụzọ imezu ya, e nwere n'ezie a miri pụtara. Nwere ike na-ekwe omume? N'eziokwu, ee. Akwụkwọ a na-egosi na ọchịchọ, mma, na ịhụnanya ndọrọ mmekọahụ n'aka ụmụ mmadụ na akparamàgwà mmadụ. N'ezie, Ọ pụrụ n'ezie ga-eji dị a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Bible. Kpaliri mmasị? Gụọ na-ahụ ụzọ dị iche iche na nke iri ise shades nke Right Now nwere ike ịkụziri gị banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta.
Ihe #1: Single-obi Ntị
Christian, isi nwoke agwa, chọrọ Anastasia, na heroine. Ọ na-eme ka nzube kemgwucha doro anya. Ya anya na mmekọahụ ike adịghị dissipate mgbe ndị ọzọ na ọmarịcha inyom itinye foto. Ya bụ nanị elekwasị anya bụ na Anastasia na Anastasia naanị.
Nke a uche dị oké mmanya na-egbu ọtụtụ ndị inyom karịsịa n'oge ka ndị mmadụ na-ekwu na ọ dị mma maka ndị ikom na-enye na-edochaghị anya mmasị na a nwaanyị. Inye gị ụbọchị zuru ntị site na iwepu-adọpụ uche na-enye juru anya ga-aka mikwuo emie njikọ gị na-egosi na ị bụ n'ezie na oge.
Ihe #2: Akwagharị na Intentionality
Mgbe nile na-achịkwa onwe ya, Christian ekpebie itinye ego oge na mgbalị n'ime na-emepe emepe a dịgasị iche iche nke ikike na nkà. Ọ na-mgbe niile na-achọ ụzọ aka ma melite onwe ya dị ka onye, dị nnọọ ka Anastasia na-eme mgbe ọ na-completes ya N'ajụjụ ọnụ Christian n'agbanyeghị otú ihe ịma aka ọ bụ.
Ezie na ọ pụrụ iyi-agaghị ekwe omume, e nwere ndị ikom na ndị inyom si n'ebe ndị ọma, nwere ọgụgụ isi, ma n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ mmetụta uche kwesịrị ekwesị. Site n'ibi ndụ a nzube ndụ site kwa ụbọchị ibu na ihe ịma aka, i nwere ike ịghọ gị mma onwe nke ga-eduga ụma na-adọta a yiri ibe.
Ihe #3: Ịdị njikere ngwangwa
Ibi Ndụ a ndụ jupụtara na ọjọọ na trauma dugara Kraịst ewere ihe niile n'ime ya aka na-elekwasị anya na ihe ịga nke ọma. Mgbe ọ ogosiri emechi anya na mbụ, Christian uma na-aghọ adọrọ adọrọ ka ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-ahapụ Anastasia ya obi ụwa na-ahapụ ya gwọọ ya.
Anastasia, mgbe jupụtara ọcha onwe-nsụhọ, ekpebie na ọ N'eziokwu otú chọrọ Christian. Ma mgbe ụwa ya bụ kpam kpam amaghị na ọhụrụ ya, makụọ ya ma na ndụ ya.
N'ihi na nke ọha mmadụ na echiche ahụ bụ na-egosi mmetụta uche pụtara adịghị ike, ọ na-adịghị anabata na-egosi ha. Ma n'ezie, na-egosi mmetụta uche bụ n'ezie otu ike ihe na-eme. Ma ka onye ọzọ gị n'ezie na-eche banyere na ntụkwasị obi na-ahụ mmetụta ndị a na-enye ohere ùgwù na mmekọrịta mikwuo emie.
Ihe #4: MKPA
Christian maara onye ọ bụ na ihe ọ chọrọ ná ndụ site na ndụ ruo ụkpụrụ dị elu na n'ihi na o n'ezie maara onwe ya. Mgbe o kpebie na ọ chọrọ Anastasia, ọ pụtara n'ezie ihe.
Ime ike mkpebi, ịbụ omiiko na-egosi ya, na-eduga gị ụbọchị na mgbakwunye na proactively okwu gị na onye òtù ọlụlụ na-enyere aka ịkụnye ike ebumnobi. Ọ bụ mgbe niile mma ịmara na ị na-nanị chọrọ ma chọrọ.
Ihe #5: Ịhụnanya, Mmetụta, na Unapologetic ọchịchọ mmekọahụ
Predictability bụ ọnwụ na-enwe agụụ mmekọahụ. Mgbe Christian na-adịghị ịpịa, pịara, ma ọ bụ ekekọta Anastasia elu, ọ na-ejide, caressing, na isusu ọnụ ya. Christian dị ike, adụ, ike ike, na-atọ ụtọ niile mgbe unapologetically achọ Anastasia. Ma n'aka, Anastasia amụta ịhụ n'anya na-achọsi ya ntị ma na-enweghịkwa nchịkwa mkpa maka ya.
Mmekọahụ ịgagharị na na na ga-enyere mikwuo emie mmekọrịta gị. N'Anya, complimenting, na chọrọ ime ka gị na onye òtù ọlụlụ obi ụtọ na-egosi na otú ị na-eche. Ihe bụ isi bụ na-egosi na ị bụ ezigbo onye n'ihi na ị chọrọ ịbụ.
Ndị a learnings si iri ise shades nke Right Now ga-enyere gị na-adọta a nrọ onye ma ọ bụ ka ị na-ama Ete mmekọrịta.
-Esi karịrị Online dịwara na-akpọ ụkwụ
13 Oge Datebọchị Oge oyi maka Ahụmịhe echetara echefu